တရုတ်အလိုအလျောက်သိပ်သည်းဆမီတာထုတ်လုပ်သူများနှင့်ပေးသွင်းသူများ - Jiahang တူရိယာများ
နေအိမ် > ထုတ်ကုန်များ > Density Meter > အလိုအလျောက်သိပ်သည်းဆမီတာ
အလိုအလျောက်သိပ်သည်းဆမီတာသည် Peltier ၏တိကျသောအပူချိန်ထိန်းချုပ်မှုနည်းပညာကို high-definition video camera နည်းပညာနှင့်ပြီးပြည့်စုံစွာပေါင်းစပ်ပေးသော U-tube oscillation method ၏မူအရ U-tube oscillation method ကိုအခြေခံသည်။ စမ်းသပ်မှုအတွေ့အကြုံ။ High-definition video သည်နမူနာ၌ပူဖောင်းလွှမ်းမိုးမှုရှိ၊ မရှိ၊ pulse excitation, high-precision detection technology ကို အသုံးပြု၍ နမူနာသိပ်သည်းဆနှင့်သိပ်သည်းဆဆက်စပ်သော parameters များကိုတိကျမြန်ဆန်စွာတိုင်းတာရန်အဆင်ပြေသည်။
၁။ ဆေးဝါးလုပ်ငန်း: API နှင့်ဆေးဝါးကြားခံများ၏အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု၊ ဆေးဝါးအေးဂျင့်များ၏တိကျသောဆွဲအားနှင့်သိပ်သည်းဆကိုဆုံးဖြတ်ပါ။
၂။ အနံ့အရသာ၊ အစားအစာအရသာ၊ နေ့စဉ်အရသာ၊ ဆေးလိပ်အရသာ၊ အစားအစာထည့်သွင်းကုန်ကြမ်းအတည်ပြုခြင်း၊
၃။Petrochemical စက်မှုလုပ်ငန်း: ရေနံစိမ်း API အညွှန်း
၄။ အဖျော်ယမကာလုပ်ငန်း - သကြားအာရုံစူးစိုက်မှု၊ အရက်အာရုံစူးစိုက်မှု၊ ဘီယာအရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု၊ အချိုရည်အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှုကိုတိုင်းတာခြင်း၊
၅။ စားသောက်ကုန်လုပ်ငန်း: စပျစ်သီးဖျော်ရည်၊ ခရမ်းချဉ်သီးဖျော်ရည်၊ မြင့်မားသော fructose ပြောင်းရည်၊ ဟင်းသီးဟင်းရွက်ဆီနှင့်အချိုရည်များအရည်အသွေးစီမံဆောင်ရွက်ခြင်း၊
၆။ ဘီယာချက်လုပ်ငန်း: အရက်၊ အဝါရောင်ဆန်ဝိုင်၊ အနီရောင်ဝိုင်၊ ဘီယာ၊ သစ်သီးဝိုင်၊ ဆန်ဝိုင်နှင့်အခြားအရက်အာရုံစူးစိုက်မှုရှာဖွေခြင်း၊
7. ဓာတုစက်မှုလုပ်ငန်း: ဓာတုယူရီးယား၊ ဆပ်ပြာ၊ glycol၊ အက်ဆစ်နှင့် alkali နှင့် ammonia အာရုံစူးစိုက်မှုစစ်ဆေးခြင်း၊
၈။ စက်ပစ္စည်းထုတ်လုပ်ခြင်း၊ သတ္တုထုတ်လုပ်ခြင်း၊ စက်ထုတ်လုပ်ခြင်း၊ မော်တော်ယာဉ်လုပ်ငန်း၊ လျှပ်စစ်နှင့်လျှပ်စစ်သန့်ရှင်းရေးအေးဂျင့်ရှာဖွေခြင်း
၉။ စစ်ဆေးရေးအဖွဲ့များ - စံဓာတ်ခွဲခန်းများ၊ တရား ၀ င်စမ်းသပ်မှုအဖွဲ့အစည်းများ၊ အရည်သိပ်သည်းဆတိုင်းတာခြင်းကိုတတိယအဖွဲ့အစည်းမှရှာဖွေခြင်း
2. Built-in Parpaste အပူချိန်ထိန်းချုပ်မှုသည်တိကျမှုနှင့်တည်ငြိမ်မှုကိုတိုးတက်စေသည်။
၃။ HD ဗီဒီယိုတွင်ပူဖောင်းများကိုရှောင်ပါ။
၅။ အလိုအလျောက်သိပ်သည်းဆမီတာ ၂၁CFR အပိုင်း ၁၁၊ စာရင်းစစ်လမ်းကြောင်း၊ ဆေးဝါးနှင့်လျှပ်စစ်လက်မှတ်
ဒစ်ဂျစ်တယ်သိပ်သည်းဆမီတာသည် Peltier ၏တိကျသောအပူချိန်ထိန်းချုပ်မှုနည်းပညာကို high-definition video camera နည်းပညာဖြင့်ပြီးပြည့်စုံစွာပေါင်းစပ်ပေးသော U-tube oscillation နည်းလမ်း၏နိယာမကိုအခြေခံသည်။ စမ်းသပ်မှုအတွေ့အကြုံ။ High-definition video သည်နမူနာ၌ပူဖောင်းလွှမ်းမိုးမှုရှိ၊ မရှိ၊ pulse excitation, high-precision detection technology ကို အသုံးပြု၍ နမူနာသိပ်သည်းဆနှင့်သိပ်သည်းဆဆက်စပ်သော parameters များကိုတိကျမြန်ဆန်စွာတိုင်းတာရန်အဆင်ပြေသည်။
U-tube Oscillation Method Density Meter ဖြစ်သည်
Digipol-D50/D70 U-tube Oscillation Method Density Meter သည် Peltier ၏တိကျသောအပူချိန်ထိန်းချုပ်မှုနည်းပညာကို high-definition video camera နည်းပညာဖြင့်စုံလင်စွာပေါင်းစပ်ပေးသော U-tube oscillation method နိယာမကိုအခြေခံသည်။ ရလဒ်များသာမကသုံးစွဲသူများအားထိရောက်အဆင်ပြေသောစမ်းသပ်မှုအတွေ့အကြုံကိုပေးသည်။ High-definition video သည်နမူနာ၌ပူဖောင်းလွှမ်းမိုးမှုရှိ၊ မရှိ၊ pulse excitation, high-precision detection technology ကို အသုံးပြု၍ နမူနာသိပ်သည်းဆနှင့်သိပ်သည်းဆဆက်စပ်သော parameters များကိုတိကျမြန်ဆန်စွာတိုင်းတာရန်အဆင်ပြေသည်။
တရုတ်ပြည်မှကျွန်ုပ်တို့၏စက်ရုံမှထုတ်လုပ်သောအဆင့်မြင့် အလိုအလျောက်သိပ်သည်းဆမီတာ ကိုစျေးသက်သက်သာသာဖြင့် ၀ ယ်နိုင်သည်။ ယုံကြည်စိတ်ချရသောအရည်အသွေးအပြင်ကျွန်ုပ်တို့၏ထုတ်ကုန်များတွင် TRAT, ISO9001, CE နှင့်အခြားအသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်များပါ ၀ င်သောကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ကုမ္ပဏီသည်တရုတ်တွင်နာမည်ကျော် အလိုအလျောက်သိပ်သည်းဆမီတာ ထုတ်လုပ်သူများနှင့်ပေးသွင်းသူများထဲမှတစ် ဦး ဖြစ်လာသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏စက်ရုံသို့အဆင့်မြင့်ပြီးအရည်အသွေးမြင့် အလိုအလျောက်သိပ်သည်းဆမီတာ ကို ၀ ယ်ရန် ၀ မ်းသာပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့ထံမှယုံကြည်စိတ်ချရသောထုတ်ကုန်များ ၀ ယ်ယူရန်စိတ်ချနိုင်ပါသည်။ ဒီထက်ပိုသိချင်ရင်မင်းနဲ့ငါတို့ပူးပေါင်းဖို့မျှော်လင့်တယ်၊ မင်းအခုငါတို့တိုင်ပင်နိုင်တယ်၊ ငါတို့မင်းကိုအချိန်မီပြန်ပြောလိမ့်မယ်။